Spider - engenangozi, kodwa njengoba umthetho, izinambuzane ezimbi eyehlela ukwesaba cishe wonke umuntu ehlangana laye. Phakathi naleso sikhathi, ngokusho kwabanye zinganekwane, umhlangano naye uthembisa izindaba ezinhle noma ngaphezu wallet yakho. House okukhulunywa izinambuzane - ukuba ukuceba nokuchuma. Abanye bakwenza yezandla ngesimo le guest house sethusa futhi ubeke endaweni egqamile. It uhlala ukuze ufunde ukuthi ungenza kanjani besicabucabu ezenziwe iphepha, ukuze kugcwaliseke zonke amabika ujabule?
1. Thatha iphepha plain, wasinikeza ukuma isikwele. Gobisa ishidi ekuqaleni nendawo, bese wenze uhlaka crease mpo, bese emphethweni idayagonali. Manje thina wengeze ezimbili idayagonali phinda ukukhungatheka kwangaphakathi, ukuze uthole isikwele encane.
2. Faka eyodwa engela sikwele phezulu futhi agobe phansi eceleni emakhoneni maphakathi. Ukugumbuqela workpiece wenze okufanayo ngakolunye uhlangothi.
3. ukuma Manje efakwe ngokugcwele, kwenza imbobo nge sikelo Thola emphethweni (igxile ngamunye ezinhlangothini ezine isikwele esikhulu).
4. Ukuze uzwisise indlela yokwenza besicabucabu iphepha, okubaluleke - qaphela kakhulu. Ngokulandelayo, agobe uhlangothi emagumbini amane enkabeni. Thola ezine isosceles calantsatfu, base zazo ukusikeka zethu. Manje, lesi sibalo kufanele zifane inkanyezi ezine olucijile.
5. Manje hlanganisa "inkanyezi" ngesigamu, ukuze phezulu namakhona phansi luqondane. It uhlala phinda imishayo Ohlangothini olubheke isikhungo, yokuxhuma ndawonye. ukubekezela Kancane kakhulu - futhi uzokwazi hhayi kuphela ukutshela, kodwa futhi ukuze babonise indlela yokwenza besicabucabu ezenziwe iphepha.
6. Beka sibalo phansi-Long Island saphinda agobe emakhoneni maphakathi. Ukugumbuqela, ukuphinda inqubo efanayo nezinye party. I-engeli acute wahlala ngezansi. Manje onxantathu oxhumene izinhlangothi kokulungile nokungalungile, ukufihla emphethweni ngaphakathi lo msebenzi.
7. Ungadumali uma nje akwenzekanga ukuqonda indlela yokwenza iphepha besicabucabu. Nweba imodeli bese uphinda wonke inqubo futhi. Ngakho niyabona iphutha. Manje siqala yokukhiqiza imilenze esabekayo isinambuzane. Ukuze wenze lokhu, wenze imbobo phakathi yezandla, ezisukela ekhoneni elingaphansi ziphethe base unxantathu. Uzoba eziyisishiyagalombili "umsila". Badinga ukubekwa ngendlela ukuze uthole besicabucabu enhle. Ukuze wenze lokhu, le amabili namabhuzu lokuqala eligoqiwe emuva, bese enhlonhlweni - futhi. Senza okufanayo nangezinye amabhangqa amathathu, ukuze onyaweni ngalunye uye ayivaliwe kulowo odlule.
8. It uhlala kuphela "avuselele" imodeli yethu, ukuze ulinike ivolumu. Ukuze wenze lokhu, agobe ekhoneni ophumile isisekelo yezandla, waphendukela isicabucabu esiswini. Busakazekela unyawo ukuthola umthamo waphenduka. Bheka, manje kuyisikhathi ngokugcwele ukulungele Hack, futhi wazi indlela yokwenza besicabucabu ezenziwe iphepha.
cute spider okunjalo, cishe ngeke eyinkinga izivakashi zakho. Nokho, asikho isidingo ukuhlola kanye iyayithusa abangane ithoyizi, ikakhulukazi uma wazi ukuthi amanye awo abantu abanamahloni. Spiderman lephepha kuyoba isikhumbuzo esikhulu, okungekho zingabekwa endaweni egqamile endlini. Manje izindaba ezinhle kini kaningi. Zama ukwenza ezinye izinqumo isinambuzane, isibonelo, ukusebenzisa imali yephepha.
"Tsar" ugqumugqumu ujamu namahlamvu cherry
I sihlukunyezwa eJalimane lamaNazi: Project "Gemini"
Izinyoka Nonpoisonous: utshani inyoka, amanzi inyoka